Makelele Oo Loo Magacaabay Tababaraha Naadiga Bastia
HomeWararka MaantaMakelele Oo Loo Magacaabay Tababaraha Naadiga Bastia
Kooxda kubada cagta ee Bastia ayaa si rasmi ugu dhawaaqday inay u magacawday Claude Makelele inuu noqdo tababaraha kooxda ee labada sanno ee soo socota.
Laacibkan hore ee qaranka Faransiiska, oo tababare ku xigeen u ahaa Carlo Ancelotti wakhtigii uu laylin jiray kooxda Paris Saint-Germain, ayaa shaqadan kooxda Horyaalka Faransiiska ka dhisan kala wareegaya Frederic Hantz.
“Bastia waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo in Claude Makelele uu noqon doono tababaraha cusub ee kooxda laylin doona labada xili ciyaareed ee dambe,” ayaa lagu yidhi, warsaxaafadeed lagu baahiyey shabakada rasmiga ah ee kooxda.
“Wuxuu ka soo degayaa Bastia maalinta Isniinta ah, markaasna wuxuu qalinka ku duugayaa heshiiska ka hor inta aanu qaban shirkiisa jaraaid ee maalintaas saacada 11:00. “Ninkan hore uga soo tirsanaa PSG waxa caawiye u noqon doona Didier Tholot. “Qoyska balaadhan ee Sporting Club de Bastia way soo
dhawaynaysaa labadoodaba.” Makelele ayaa kamid ahaa xidigaha khadka dhexe ee ugu awooda badan kubada cagta ee waayadan casriga ah, waxaanu u soo ciyaaray kooxaha ugu awooda badan Yurub oo ay kamid yihiin Real Madrid, Chelsea iyo PSG ka hor intii aanu macasalaamayn kubada cagta sanadkii 2011.
Thiago Silva: Mourinho Waa Bilaa ixtiraam